I-Fort Farm Country Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguElaine
Indlu enkulu evulekileyo yeplani enepanorama yokutshona kwelanga ebekwe kwifama yenkomo yasekhaya. Isitovu seWoodburner sobusuku obupholileyo kunye nekhitshi langoku lemveli zonke zisanda kuhonjiswa ngo-2020. Inkqubo yokufudumeza ephantsi.
I-4. yeekhilomitha ukusuka kwindawo ethandwayo yabakhenkethi, i-'Dark Hedges' yabalandeli be-Game of Thrones. Ukuhamba umgama ukusuka kumbindi wedolophu yaseBallymoney apho uya kufumana iJoey Bar kunye nezikhumbuzo zaseDunlop. Ubuninzi bemizuzu eli-15 ukusuka kwiilwandle ezikuNxweme oluseMntla, iRoyal Portrush Golf Club kunye neRamore Restaurants.
Imizuzu eli-15 uqhuba ukusuka kuLwandle lwaseMntla kuNxweme, kwindawo yokutyela eRamore kunye neRoyal Portrush Golf Club ebibambe iBritish Open ka-2019.
Ifumaneka kumgama oziikhilomitha ezimbalwa ukusuka 'kwi-Dark Hedges' kuyo nayiphi na i-Game of Thrones abalandeli.
Ukuhamba umgama ukusuka kwiZiko leDolophu yaseBallymoney.
Iisetingi zasemaphandleni kumda weBallymoney Town. I-Northern Ireland, iindlela zelizwe kunye noxolo & nokuzola. Imizuzu eli-15 uqhuba ukuya ePortrush edlamkileyo, imizuzu engama-20 ukuya eBallycastle. I-Serengeti panoramic sunsets ngaphandle kwerhamncwa. Imizuzu engama-20 yokuhamba ukuya kwisikhululo sikaloliwe kunye nokufikelela kumgca ophambili weBelfast kunye neDerry, ikwaqeqesha ukufikelela ePortrush ubusuku bonke ngaphandle kwemoto.
Trustworthy, loyal and organised.